ဓမ္မရသ: "အမေး အဖြေ(၃)"
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 24.2.09
သေသေချာချာ မှတ်သားသွားပါတယ်.. အဖြေလေးတွေက တော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်... မှန်ကန်တယ်..
ရုပ်တရားက ကုဋေငါးထောင် နာမ်တ၇ားက ကုဋေတစိသိန်း ဖြစ်ချုပ်နေတာကို ၀ိပသနာ ဥာဏ်နဲ့ ထင်မြင်အောင် ကြည့်တတ်ဖို့ ကို ဆရာတော်တွေ ဟောပြောသွားတာကို သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးတာ အင်မတန် ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖြေလေးတွေပါ။
ရိပ်သာတရားပြဆရာတော်တစ်ပါး ပြောပြဖူးတာကို ဒီနေရာမှာမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
တရားအားထုတ်မှုကြောင့် အသိဥာဏ်ရင့်လာလေ၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပိုမြင်လာလေ၊ စိတ်ကတွေ့ ကရာလျှောက်သွားပြီး လျှောက်ပြစ်မှားနေတာကို ပိုသိလာလေဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့၊ အဲဒီအခါမှာ စိုးရိမ်မှု၊ ကုက္ကုစ္စ နောင်တပူပန်မှုမဖြစ်ဘဲ အတွေးမှန်သမျှကို လိုက်သိပေးနေဖို့ ဆုံးမပါတယ်။
နောက်ပြီး စိတ်နှင့်ပြစ်မှားတာတွေကို စိတ်နှင့်ဘဲပြန်တောင်းပန်လို့ ရပါတယ်လို့ဆရာတော်က ပြောဖူးတာ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောညွှန်ဆုံးမထားသလို စိတ်ထဲမှာ ဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာ ဖြစ်ပျက်မှတ်ပစ်ဆိုတဲ့ အဆုံးအမ တစ်ခွန်းတည်းနှင့်တင် တရားအာရုံတွေအပေါ် မိမိကိုယ်ကို သံသယဖြစ်မှုမှ အတော်ကို စိတ်သက်သာရာရစေတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အတွေးတွေဟာ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုရှိလို့ ပေါ်လာတာဘဲ။ သဘာဝတရားတွေဘဲလို့ ကိုယ်ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ဘဲ ထိထိမိမိနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်လဲ အတော်လေးနေသာထိုင်သာရှိတာတွေ့ ရပါတယ်။
မေးခွန်းတွေရော ဖြေတာတွေရော ဖတ်သွားပါတယ်... မန့်မှာရေးထားတာတွေလည်းဖတ်သွားတယ် . အားလုံး မှတ်သားသွားပါတယ်.
အဲဒီ စိတ်က...မဖြစ်သေးတာကို ကြိုတင်တွေးတော ပူပန်တာပါ။ ပူပန်တယ်ဆိုကတဲ့က သောကပါ..သိပ်တော့မကောင်းပါဘူး။
(၁)ပထမဆုံးဘယ်အရာကို မဆို မြင်လိုက်တာ နဲ့ စိတ်မှာ မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့ မှတ်ရမယ်။
(၂)အဲဒီနောက် ဆင်ခြင်ရမှာက..ဒီမြင်စိတ်လေးက...ခဏပဲနေပါတယ်။ ဖျတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်။(ဥပမာ...ကောင်မလေးချောတယ် လို့စိတ်မှာပေါ်တယ်..အဲဒီစိတ်လေးက ခဏတွင်းဖျတ်ကနဲ ပျောက်သွားပါတယ်။) စိတ်ဟာ အန်မတန်မှ လျှင်မြန်ပါတယ်။ ဖျတ်ခနဲ ဖြစ်.. ဖျတ်ခနဲ...ပြီးဆုံးသွားတာမျိုးပါ။
(၃)အဲဒီအချိန်မှာ ဆင်ခြင်ရမှာက...အသိလေး လိုက်ပေးရမှာက....ဒီစိတ်လေး... ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပျက်သွားတယ်။ ဒီစိတ်ကရောမြဲလား။ မမြဲဘူး။ ဖြစ်ပြီးပျက်နေတာပဲ။ အဲလိုနှလုံးသွင်းပါ။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ စိတ္တာနုပသာနာ စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ၀ိပသာနာ၎မျိုးထဲက စိတ္တာနုပသာနာ ကို အားထုတ်လိုက်ရင်...အဲဒီစိတ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
မေးခွန်းလေးနဲ့ အဖြေလေးတွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အနှစ်သာရရှိတဲ့စာများ ဘလော့ပေါ်မှာ တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ဗျ-စိတ်ထဲ မကောင်းစိတ်ပေါ်မှာ ကြောက်လေ ပိုဆိုးလေပဲ-ကြာတော့ အရမ်းစိတ်ညစ်လာတယ်။ ငါတော့ ဖြေစရာမရှိအောင် ငရဲရပြီပေါ့။ အမှန်က ကုက္ကုစ္စဖြစ်တာ တရားနဲ့ပိုဝေးသွားတာပဲ။ကိုယ်၌က မကောင်းတာတွေးချင်တာမှ မပာုတ်တာနော။ ဒါနဲ့ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ သတိ(ပဌာန်) ၊မိမိစိတ်ကို မိမိ အသိကပ်ပေးနည်း၊ မိုးကုတ်နည်း နဲ့ ဦးဆန်းလွင် ရဲ့ စိတ္တာနုပဿနာ ရှုနည်းတွေ ၊ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားတဲ့ သဘောကို နားလည်လာတော့ တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပြီး စိတ်သက်သာရာ ရခဲ့ရပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုသာ တရားနဲ့မတွေ့ခဲ့ရင် ရုးနိူင်တယ် ထင်တယ်။စိတ်ရဲ့တုန့်ပြန်မှု သဘာဝကအံသြစရာပါ